2021 Taizhou Viwanda Expo (TIE)
Your Like Power (Fuzhou) Co., Ltd vakapinda 2021 Taizhou Industry Expo (TIE) muna Taizhou International Convention uye Exhibition Center pana July 31 -August 1, 2021. Zviratidziro zvekambani yedu mota dzimba dzimba dzemhepo compressors uye zvakajairika motors.Zviri zvigadzirwa zvakakwezva kufarira ...
Kugadziriswa kweAngle yekumberi pane injini yedhiziri injini yekupinza jekiseni
Kuti uwane kupisa kwakanaka, ita kuti injini yedhiziri imhanye zvakajairika uye uwane yakanyanya mafuta mafuta, iyo jekiseni kumberi Angle inofanirwa kugadziriswa ...
Iyo 21th China International Electric Motor Expo uye Foramu
Yako Senge Simba (Fuzhou) Co, Ltd yakapinda iyo 21th China International Electric Motor Expo neForamu muShanghai New International Expo Center muna Chikumi 27-29,2021. 2021 iyo 21st musangano weChina wepasirese kuratidzwa uye kusimudzira kwemagetsi BBS naGoo HAO kuratidza (Shanghai) co., LTD., Ku ...
Ndeipi mhedzisiro yekupisa tembiricha pasimba reesetereta jenareta seti?
Hazvina mhosva kuti ndeipi mhando, inounzwa kunze kana epamba dhiziri jenareta seti, mashandiro avo anozokanganiswa nemamiriro ekushanda. Izvo zvinhu zvitatu zvezvakatipoteredza, kukwirira, tembiricha uye hunyoro, zvine hunyanzvi hwakajeka pane dhiziri jenareta seti: 1. Kukwirira. Iko kushandiswa kwese dhiziri ...
Kukundikana kuongorora uye mhinduro yeDizili injini yekumanikidza yakaderera
Kukundikana Kuongorora: A .. Oiri yemafuta yakadzika mune mafuta sump. B. Iyo yekumanikidza yekumanikidza inodzora chitubu kutsemuka; C. Oiri firita yerabha kuchembera oirige inodonhedza D. Oiri yekumanikidza mita yakaputsika E. Iyo firita yemafuta mumafuta sump kuvhara. Troubleshooting A. Chengeta oiri sump oiri mune yakamira yakazara chiyero, nenguva yekuwedzera mafuta B. R ...
Management yekugadzira nzvimbo uye mutoro weanoshanda
Management system yedhiziri jenareta kamuri 1. Chekutanga, wemagetsi anofanirwa kushandisa jenareta nenzira kwayo maererano nemitemo yekushanda, ita basa rakanaka mukuchengetedza jenareta kazhinji, nyora rekodhi rakanaka apo genst inoshanda nguva dzese. 2.Tarisa zvikamu zvese zvejenareta, kutonhora, mafuta ...
Zveruzhinji ruzivo rwe dhiziri jenareta seti
Kugadzirira chikwata chisati chatanga 1. Tarisa uone kuti oiri yemafuta ekuzora mafuta, inotonhorera uye huwandu hwemafuta zviri mukati meyera yakatarwa uye mukati meiyo yakatarwa renji. 2, tarisa injini yedhiziri yemafuta, girisi, kutonhora sisitimu yega yega uye mubatanidzwa kuti paine ...
Smooth inotumirwa pasi pesimba reCovid-19
Yakabatwa neCovid-19 nyowani mu2020, maindasitiri akasiyana siyana akatambura zvakanyanya, uye ichave hombe inotonhora kune hupfumi hwepasirese, kutengeserana uye kushandiswa kwepasirese. Iwo mashanu makuru maindasitiri akadai sekudyira, kutakura, kushanya uye zvivakwa, pamwe nekutengesa kunze kwenyika, vachasangana newe ...
Bauma China. Bauma China inyanzvi yekuratidzira chikuva muAsia kune iyo indasitiri yeco ...
ne admin pane 19-12-02
"Sayenzi yakakosha simba rekufambisa mukati, izwi rekuti" nyowani uye yepamusoro tekinoroji bhizinesi "rinoreva kodzero yekambani yakazvimirira yezvivakwa kodzero dzakaumbwa kuburikidza nekuenderera mberi nekutsvaga uye kusimudzira uye shanduko yetekinoroji ...
Tigamuchire Mutevedzeri weMutungamiriri weTimor Kuti arege nenhume dzake kuti vashanyire kambani yedu
ne admin pane 19-09-10
Musi waGunyana 10, apo mutambo weMid-Autumn wave kusvika, mutevedzeri weMutungamiri weTimor Lest nenhumwa dzake vakashanyira kambani yedu kuti vadzidze chirongwa chekuparadzira simba CCHP uye mvura yegungwa desalination uye kukwazisa kumafaro kuvashandi vedu. ...
Muna Chikunguru 2017, kambani yedu yakapihwa inotungamira Enterprise chitupa cheFujian Provincial Science uye Technology Giant.
Chitupa ichi chinoratidza kuti kambani yedu ine yakasimba kushanda uye manejimendi timu, inonzwika yezvemari sisitimu, yakasimba musika kusimba, inochinjika inokurudzira maitiro. Uye iko kuita kwacho kwakanaka, kune mukana wekuvandudza uye kukosha kwekurima zvakanyanya. Mukuita kwekutsvaga, kukura ...